« Inona no atao hoe orinasa? »
Fampianarana FANDRAHARAHANA amin’ny fomba malagasy. Tsotra, fohy nefa mazava tsara.
Ato anatin’ito vidéo fohy ito dia azavaina aminao ny atao hoe « orinasa ». Matetika tokoa mantsy dia « Birao » na « trano iasana » no fandraisan’ny olona ny atao hoe orinasa.